Donate Money — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited March 2009 in MZ News
ဒီနေ့ K နိုင် က နယ်က လာပြီး ရန်ကုန်ကိုရောက်တုန်း ၂ သောင်း MZ ကိုလှုသွားပါတယ်ဗျာ။ exiter ကလည်း $5 လှုထားပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိ စာရင်းလေး ပြန်ထုတ်ပြန်ပေးပါ့မယ်။ :6:
ချင်ကာပူမှာလဲ ကောက်လို့ရသလောက် ပို့လိုက်မယ်နော်။ :67:
Next week ... Sat & Sun days ( 17,18 January ) တွေမှာ ... ကျနော် ရန်ကုန်လာမယ် Bro တို့ရေ ......... ဘယ်လို Donate လုပ်ရမလဲပြောပါဦး ...........
ဒီတစ်ခေါက်လာပြီးရင် ဘယ်တော့ကြာမှ ပြန်ရောက်ဦးမလဲမသိလို့ ................
ကျနော့်ဆီ Phone ဆက်ချင်ရင် ....... 098610096 ( or ) 013336661 တွေကိုဆက်လို့ရပါတယ် .... **( နယ်ေ၀းဖုန်းတွေမဟုတ်ပါ ... ကမ်းရိုးတန်း CDMA နဲ့ IPStar Phone တွေပါ။ )
ဒါမှမဟုတ် ........ ကျနော်ကိုလဲ Phone No. တွေပေးကြပါဦး .... PM နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ..........
Alexander's real name က Henry ( ဟင်နရီ ) ပါ .........ရောက်နေတဲ့မြို့က မော်ကျွန်းမြို့ပါ။
နေ့ရော ညပါ အချိန်မရွေးဆက်နိုင်ပါကြောင်း ............. :6:
cash exchange rate ကိုကြည့်ပြီးမှ ကျေးဇူးတင်နော်:D
ကိုအင်ဖိုက ဒေါ်လာ တစ်သန်းတောင် လှူမှာလား။ :d
lwinsu wrote: »
ဘယ်ကလာ ဒေါ်လာတစ်သန်းကမှာလဲ။ ဇင်ဘာဘွေဒေါ်လာတစ်သန်းကို ယူအက်စ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ရှိလဲ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖတ်ပါဦး။
အံမလေး ဇင်ဘာဘွေဒေါ်လာဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း တစ်သန်းမဟုတ်ဘူး ၂ သန်းလှူပါမယ် :d
(လှူရဲလိုက်တာလို့တော့ မပြောနဲ့နော်..... လေနဲ့လှူရတာ ပိုက်ပိုက်ကုန်တာ မှတ်လို့)
ကျနော် ပြန်လာရင်တော့ လှူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....
အလှူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရင်းတွေ တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လှူတဲ့သူတွေ အကြောင်းပဲရေးပါမယ် ... ကျန်တာတွေ ဖျက်ပါမယ်။
သာဓု..ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား... ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်ရောက်ရင်... တတ်နိုင်သလောက်လှူပါမယ်..
Please donate Kyats 10,000 on my behalf when you makeadonation in Yangon. I will send the money to Mawgyun tomorrow (13/1/09) with Tony who is going to Mawgyun.
I was using summer_boy's computer since my computer was not working at that time and sent the above message from his account. Now my computer is in working condition again. Thanks to his IT supports. Please collect the money from Tony.
Oscar Charlie3... This is Goft Charlie 8.1 .... I read u 5/5 .......... :)):D
အကို့ အတွက်ပါ ရောပြီးလှုလိုက်မယ် ... PawPaw လဲလှုမယ်တဲ့ ... မိုးသက်ထား လဲလှုလိမ့်မယ်။ Summer_Boy ကိုလဲ အလှုငွေ ထည့်ဖို့ပြောပါဦး ............
ဒါဆို ... MZ က Oscar Charlie, Goft Charlie, Goft Delta တွေ လူစုံပြီ အကို ။ ။
သာဓု .... သာဓု .... သာဓု
Thanks. Please donate 5,000 for summer_Boy (not US$). He will give you back.
Oscar Charlie3OUT.:((
မကွေးမြို့မှ Geolsky ၊ ထန်ထန်လေး ၊ ချစ်လေး တို့က ကျွန်တော့်ဆီမှာပေါင်းပြီး လှူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းသီးသန့်နဲ့ပါ။ မကွေးမှ ကျွန်တော်တို့ဆီကတဆင့် လှူချင်သောသူများရှိလျှင် ကျွန်တော့်ဆီ pm ပို့ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ ဖေဖော်၀ါရီ ပထမပတ်ထဲမှာ အလှူငွေပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ လူကြုံဖြင့်သော်လည်းကောင်း တနည်းနည်းနဲ့ရောက်အောင်ပို့မှာပါခင်ဗျား။
Kနိုင်ရဲ့ nick ကိုရှာမတွေ့သေးပါ။ တွေ့ရင် ပြောကြပါအုံး။
exiter $7 နှင့် ကိုကိုဝင်း ၅၀၀၀ ကျပ် James ဆီက ၁၀၀၀၀ ကျပ်တို့ လက်ခံရရှိပါတယ်။
ဟီးဟီး မှားနေပြီ ကျွန်တော်က ငါးကျပ်တည်း ကျန်တဲ့ နှစ်ကျပ်က ကိုဒီဘီ့ ဟာဗျ ...
I could not see sumer_boy and my name in the list yet. May be you did not have the chance to go to Yangon.
Ye Htet ၂၀၀၀၀ ကျပ်
geolsky ၅၀၀၀ ကျပ်
ထန်ထန်လေး ၅၀၀၀ ကျပ်
Chitlay ၅၀၀၀ ကျပ်
piglay ၅၀၀၀ ကျပ်
thantzinaung ၃၀၀၀ ကျပ်
စုစုပေါင်း ၄၃၀၀၀ ကျပ် (လေးသောင်းသုံးထောင်ကျပ်တိတိ)
ကိုMr.DBA လိုကြောင်ရုပ်မသုံးလို့နဲ့တူတယ်။ လောလောဆယ် ဒီလောက်ပဲရတယ်ဗျာ။ ကိုစေတန်ရေ ကျေးဇူးပြုပြီး လက်ခံရရှိကြောင်းလေး post တင်ပေးပါဦး။:)
Somebody ( MinMin & MawMaw ) help me !!!! (:((:((
ပြောကုန်ကြပြီ .... အလှုမထည့်သေးလို့တဲ့ .....
mz အတွက်အလှုငွေလဲ ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိဘူး။ ကျနော်က ရန်ကုန်ပြန်လာလဲ တစ်ရက်ခွဲလောက်ပဲအချိန်ရတော့ ... ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်တောင် မပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်။ UNICEF & UNDP က သူငယ်ချင်းတွေလဲ သူတို့ ငွေတွေ လှုဖို့ယူထားပြီး မပေးရသေးဘူးဆိုပြီး ဆဲလှပြီ .....
ရန်ကုန်က မော်မော်တို့ မင်မင်တို့ .... ကူညီပြီး သူ့ကို အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး ယူလိုက်ကြပါဗျာ ..... MysteryZillion or MZ ကဆိုပြီးပြောရင်သူသိပါတယ် ... ကျနော် မှာပေးထားပါတယ်။
Thanks brother. MinMin & MawMaw will solve it out.
ဒီလိုမှပေါ့ Alexander ရာနိုမို့ဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးရကတည်းကသိမ်းထားတဲ့ ဓါးကမင်းအတွက် ဖြစ်သွားမယ်။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ညီလေး စာ:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Bro kwinoo & summer_boy တို့လဲ ရန်ကုန်သွားဖြစ်ရင် ... MZ ကတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင် ... ကျနော့်ကိုပြောပါဦး .....
ကျနော် ၃၅၀၀၀ မော်ကျွန်း UNICEF ကနေ ဘိုကလေး UNICEF ကို လှမ်းပေးလိုက်ပါမယ်။
Alexander - 10000
kwinoo - 10000
မိုးသက်ထား - 5000
ပေါ်ပေါ် - 5000
Total - 35000
လှုမယ်ဆိုပြီးမလှုဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီနော် ... ကျနော်လဲ မင်မင် မော်မော် တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။
လမ်း ၅၀ အထက်ဘလောက် Cycodyno Internet Cafe' ကို လာခဲ့လိုက်ပါလားခင်ဗျာ...... ညနေပိုင်းဆိုရင် ကျနော်ရှိတတ်ပါတယ်....... စေတန်လည်းရှိတယ် စည်သူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ ကျနော်လာယူချင်ပါတယ်.... ၁ ရက်နေ့ စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ အားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ.......
I have already giving money to Alexander for donation:67::67: